Ny kinova Google Chrome sy Chromium 74 vaovao dia efa navotsotra | Avy amin'ny Linux
Google dia nampiditra fandefasana kinova vaovao amin'ny tranokalanao Chrome 74 ary miaraka amin'izay koa, misy kinova tsy miovaova amin'ilay tetikasa Chromium maimaim-poana. Niampy fanatsarana vaovao, fanasongadinana sy fanamboarana bibikely ao amin'ity kinova ity.
Ho fanampin'ny fanavaozana sy ny fanamboarana bibikely, 39 marefo no namboarina tao amin'ilay kinova vaovao . Betsaka ny faharefoana hitan'ny fitaovana fanandramana mandeha ho azy AddressSanitizer, MemorySanitizer, LibFuzzer, ary AFL.
Tsy nisy olana marim-pototra hita fa mamela ny tsy hihoarana ny haavon'ny fiarovana sy ny kaody rehetra amin'ny rafitra ivelan'ny tontolon'ny fasika.
Ao anatin'ny programa valisoa vola amin'ny famaritana ireo marefo amin'ny kinova ankehitriny, Google dia nandoa loka 19 $ 26,837 (loka efatra $ 3000, loka efatra $ 2000, bonus iray $ 1337, loka efatra $ 1000, loka telo $ 500).
1 Ny fiovana lehibe indrindra amin'ny Chrome 74
1.1 Fiovana hafa
1.2 Inona no vaovao ho an'ny Android
2 Ahoana ny fanavaozana ny Google chrome 74?
Ny fiovana lehibe indrindra amin'ny Chrome 74
Amin'ireo zava-baovao farany misongadina ao amin'ity kinova vaovao an'ny Chrome 74 ity dia ny fahatongavan'ny fiasa ho an'ny sehatra Windows izay ahafahan'ny mpampiasa mankafy lohahevitra famolavolana interface tsara maizina (Ao amin'ny kinova farany, nomanina layout maizina ho an'ny macOS).
Satria ny layout mainty dia saika mitovy amin'ny fisian'n incognito, mba hanasongadinana ny fomba fiasa manokana, nasiana tondro manokana fa tsy ny mombamomba ny mombamomba ny mpampiasa, izay mampiseho koa ny isan'ny varavarankely misokatra amin'ny maody incognito .
Ho an'ireo mpampiasa orinasa, nanampy ny fampiasa Chrome Browser Cloud Management hitantanana ny fikirakiran'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny console admin Google.
Chrome 74 dia nofoanana ary hesorina amin'ny iray amin'ireto kinova manaraka ireto ny trano "Avelao ny fisintomana raha tsy ampidirina ny mpampiasa", tamin'ny alalany no ahafahana mandamina fisintomana rakitra mandeha ho azy mandritra ny fanodinana iframe.
Amin'ny ho avy, Voarara ny fanombohana fampidinana rakitra raha tsy misy hetsika mazava ataon'ny mpampiasasatria izy io dia nampiasaina tamim-pahavitrihana hanararaotana, hametrahana ny fisintomana ary hanoloana ny sombin-malware ao amin'ny solo-sain'ny mpampiasa
Hanombohana ny fisintomana, mila mikitika ny mpampiasa amin'ny pejy mitovy ianao. Tany am-piandohana, ny fanesorana ny fananana dia nomanina tao amin'ny Chrome 74, saingy nahemotra hatramin'ny Chrome 76 ny fanesorana azy.
Amin'ireo fanovana hafa misongadina amin'ity kinova Google Chrome 74 ity dia el fanohanana fanandramana ( 'chrome: // flags # mamela-text-fragment-vatofantsika") ho an'ny maody Scroll-To-Text, inona pAhafahanao mampifandray amin'ireo teny na fehezanteny tsy voafaritra manokana tag mazava tsara ao amin'ilay antontan-taratasy mampiasa lamin'ny html tag "anarana" na fananana famantarana.
Raha handefa ny rohy dia misy tolo-kevitra manokana atolotra "# TargetText =", izay azonao hamaritana ny lahatsoratra ho an'ny tetezamita.
Azonao atao ny manondro sarontava izay misy andian-teny izay manondro ny fiandohana sy ny faran'ny sombin-javatra amin'ny fampiasana kôma amin'ny fisarahana (ohatra, «ohatra.com # targetText = manomboka% 20words, end% 20words");
Ankoatra izany, koa Safidy fanandramana LazyLoad nasongadina ( 'chrome: // flags / # allow-lazy-image-loading "sy" chrome: // flags / # mamela-kamo-frame-loading"), rehefa alefa, ny browser dia tsy mampiditra iframes sy sary, ivelan'ny faritra hita maso mandra-pamindran'ny mpampiasa ny atin'ny pejy mankany amin'ilay faritra teo alohany.
Ny maody vaovao dia mamela anao hampihena ny fanjifana fitadidiana, hampihena ny fifamoivoizana ary hampitombo ny hafainganan'ny pejy fanokafana voalohany.
Inona no vaovao ho an'ny Android
Raha ny kinova Android, ny maody "Data Saver" dia nosoloina ny maody "Lite" ary mamadika ny Data Saver ao amin'ny Chrome 74 ho tapaka.
Maody maivana azo alefa amin'ny fikirana (Fikirana> maody Lite), fa raha "Data saver" no nampidirina teo aloha dia ho mavitrika ho azy ny maody Lite.
Tsarovy izany Ny maody Lite dia ahafahanao manafaingana ny fandefasana tranonkala sy hampihena ny fifamoivoizana amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny Google, manatsara ny pejy angatahina amin'ny sidina hojerena amin'ny finday.
Ahoana ny fanavaozana ny Google chrome 74?
Raha efa napetrakao ny tranokala ary te-hanavao ity kinova vaovao ity ianao, mandehana fotsiny amin'ny menio browser (ireo teboka telo amin'ny ilany ankavanana) ao:
"Vonjeo" - "Fampahalalana Chrome"
Na afaka mandeha mivantana avy amin'ny baran'ny adiresinao mankany amin'ny "chrome: // setting / help"
hahita ny kinova vaovao ilay mpitety tranonkala, misintona azy ary mangataka anao hamerina azy fotsiny.
Ary farany, ny kinova manaraka an'ny Chrome 74 dia kasaina havoaka amin'ny 4 Jona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Navoaka sahady ny kinova Google Chrome sy Chromium 74 vaovao